कुश्मा, अब १० वर्षपछि फेरि 'बन्जी जम्प' गर्न आउनेछु :: कृष्णप्रसाद पौडेल :: Setopati
साँझ 'द क्लिफ'को वेबसाइट हेरेर फोन गरेँ। उताबाट कति जना हो? मिलाउन सकिन्छ, मेसेजमा इमेल र नाम लेख्नुहोस् भने। मेरो पर्खिने धैर्यता थिएन। मैले आफ्नै कोठामा आराम गर्न पुगेका शारदा र सिन्ड्रेलालाई टेलिफोनबाटै सोधेर म, शारदा र सिन्ड्रेलाको नाम लेखाएँ।
यसपछिको पालो मेरो थियो। म पनि त्यसैगरी छेउसम्म पुगेँ। १,२... भन्दै गर्दा उड्न खुट्टा उचालेँ र दुवै हात फैलाएर हाम फालेँ। म सकेसम्म सबै थाहा पाउन सचेत हुने कोसिसमै थिएँ तर हाम फालेपछिको पहिलो झड्कापछि मात्र सबै देखेँ।
पुल तरेर फर्किँदा अब दश वर्षपछि फेरि बन्जी खेल्न आउने सम्झिँदै फर्किएँ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख २२, २०७८, ०२:१६:५४
मनका भावना र सन्देश लेखेर दिन सकिने चकलेट!
आफ्नो पक्षमा माहोल हुँदाहुँदै ओलीले किन गराउन चाहेनन् निर्वाचन?
ओलीलाई सर्वसम्मतिको सर्वाधिकार दिने प्रस्तावमा भीम रावलले जनाए आपत्ति